Hay’ado ka tirsan DF oo lagu eedeeyey inay gudbiyaan qaraxyada Al Shabaabka | Hadalsame Media
Home Wararka Hay’ado ka tirsan DF oo lagu eedeeyey inay gudbiyaan qaraxyada Al Shabaabka
(Muqdisho) 27 Okt 2020 – Hay’adda Sirdoonka Somalia ee NISA ayaa Booliiska, Kastamka iyo Wasaaradda Maaliyadda DF ku wada eedeeysay, inay sabab u yihiin inay Shabaabku walxo qarxa kala soo degaan Dekedda Muqdisho.
Waxay NISA sidoo kale sheegtay inay Shabaabku lacag baad ah ka qaadaan Dekedda wayn ee Muqdisho.
NISA ayaa tilmaantay inay qabatay 10 konteennar oo ay ka buuxaan walxaha qarxa iyo 79 metric ton oo ah aashitada gooysada ah ee beteriyada lagu shubo (Sulfuric Acid), taasoo la doonayey in qaraxyada loo adeegsado.
Hay’adda NISA ayaa sidoo kale sheegtay inay hadda kaddib go’aansatay in baaritaan lagu sameeyo dhamaan konteenarada kasoo degaya Dekedda, iyadoo isha ku hayn doonta waxyaabaha kasoo degaya halkaasi.
Arrintan ayaa nidaam ahaan u muuqata mid yara la yaab ah, maadaama hay’adahan la eedeeyey ay yihiin kuwii ay ahayd inay shacabka ilaaliyaan, waxaana marar badan horay loo sheegay in ay jirto habacsanaan ballaaran iyo hab-raac xumo.
Previous articleDalalkii ugu badnaa ee Muslim ah oo qaaddacay badeecada Faransiiska (Dalal u hiilliyey)
Next articleFaransiiska oo iyaga oo is yara jilcinaya ka hadlay go’aanka ay ka qaateen badeecada ka imanaysa Turkiga